मोसन सिकनेस अर्थात वान्ता रोक्न के गर्ने ? यस्तो छ डाक्टरको सुझाव – bampijhyala.com
Home > पत्रपत्रिका > मोसन सिकनेस अर्थात वान्ता रोक्न के गर्ने ? यस्तो छ डाक्टरको सुझाव
३ कार्तिक २०७७, सोमबार ११:२७ bampijhyala
०२ कार्तिक , बाँपीझ्याला, काठमाडौं । गाडीमा हुने मोसन सिकनेस अर्थात वान्ता र कतिपय मानिसलाई गाडी सम्झने बित्तिकै रिगंटा लाग्ने हुन्छ । अझै धेरैजसो लाई त गाडीमा यात्रा गर्दा अत्यधिक वान्ता भएर शरीर शिथिल बन्छ ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डा. शेरवहादुर पुन भन्छन्, ‘एउटै गतिमा यात्रा गर्दा शरीरमा विभिन्न अंगमा हुने असन्तुलनले कतिपय मानिसलाई गाडीमा यात्रा गर्दा वान्ता हुन्छ यसलाई हामी मोसन सिकनेस भन्छौं,’ उनले भने, ‘गाडीमा यात्रा गर्दा मानिसहरु एउटै ठाउँमा बसेर विभिन्न दृश्यहरु एउटा गतिमा देख्छन् जसले गर्दा आँखा कान र मस्तिष्कलाई असन्तुलित बनाइदिन्छ अनि वाकवाक लाग्ने, बान्ता हुने हुन्छ ।’
धेरैजसो बालबालिका माइग्रेनका बिरामी, महिनावारी भएकी महिला, गर्भवती महिलामा यसको संवेदनशिलता बढी देखिन्छ ।
विशेषगरी गाडीमा यात्रा गर्दा शरीरका इन्द्रियहरुले सन्तुलित ढंगले काम गर्न सक्दैनन् । त्यसैले कोही कोही मानिसलाई वान्ता हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
गाडीको एउटा गतिमा यात्रा गर्दा वान्ता हुनु, वाकवाकी लाग्नु सामान्य हो । त्यसैले यस्तो समस्यालाई जटिल रुपमा नलिन चिकित्सकहरु सुझाव दिन्छन् ।
त्यसैले गाडीमा यात्रा गर्दा वान्ता हुन्छ भने यात्रा गनर््ुभन्दा आधा घन्टा अघि वान्ता नहुने औषधि लिनुपर्ने डा. पुन बताउँछन् ।
‘धेरैजसो मान्छेलाई गाडी चढ्ने भन्ने बित्तिकै रिगंटा लाग्न सुरु हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले यस्तो समस्या भएका मानिसले औषधि सेवन गर्दा राम्रो हुन्छ ।’
यस्तै आयुर्वेद चिकित्सक डा. ऋषिराम कोइराला खानपानको कारणले गाडीमा यात्रा गर्दा वाकवाकी अथवा वान्ता हुने बताउँछन् ।
त्यसैले गाडीमा यात्रा गर्दा मैदाजन्य खानेकुरा नखाने र गाडीमा यात्रा गर्दा सुकमेल, अदुवा मुखमा राख्दा फाइदा पुग्ने उनी बताउँछन् ।
‘गाडी चढ्दा बान्ता हुनु वाकवाकी लाग्नु सामान्य समस्या हो,’ उनले भने, ‘यसबाट बच्नका लागि मैदाजन्य खानेकुरा नखाने र यात्रामा निस्कँदा सुकमेल अथवा अदुवा थोरै मुखमा राख्दा यसले वान्ता हुन दिँदैन ।’
डा. शेरवहादुर पुन, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल
गाडीमा शान्त बस्ने ।
सिधा अगाडी एउटै बिन्दुमा हेर्ने ।
गाडी अथवा जुनसुकै सवारी साधनमा हिड्दा झ्यालबाट देखिने नजिकको भन्दा पनि टाढाको दश्यमा ध्यान केन्द्रित गर्दा रिंगटा लाग्न कम हुन्छ ।
यात्रा गर्नुभन्दा आधा घन्टा अघि वान्ता नहुने औषधि खाने ।
गाडी चढ्नुअघि मलाई वान्ता हुन्छ, रिंगटा लाग्छ भनेर नसोच्ने । यस्तो सोच्यो भने वान्ता हुने सम्भावना हुन्छ ।
वान्ता हुने मान्छेले सकभर अगाडिको सिट रोज्ने । किनभने पछाडि बस्दा गतिको बढी अनुभूति हुन्छ ।
हल्का अमिलो, पिरो खानेकुरा र कागती सेवन गर्ने ।
आँखा चिम्म गरेर बस्ने ।
कतिपयको यात्राका बेला किताब पढ्ने बानी हुन्छ यदि वान्ता हुन्छ भने गाडीमा यात्रा गर्दा पढ्ने काम नगर्ने ।
प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दै ३ कार्तिक २०७७, सोमबार ११:२७
अर्जेन्टिना र चिलीले बराबरी ३ कार्तिक २०७७, सोमबार ११:२७
विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र आजदेखि शुरु ३ कार्तिक २०७७, सोमबार ११:२७
काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि निषेधाज्ञा कति खुकुलो ? कति कराई ? ३ कार्तिक २०७७, सोमबार ११:२७
हजुरको आजको दिन, ०७८ असार १ गते, मंगलवार, १५ जुन २०२१। ३ कार्तिक २०७७, सोमबार ११:२७